Uzothwala nzima uHlanti kwiBucs noma kwiChiefs
USIFISO Hlanti ozobhekana nenselelo engayiwa yokuqhubeka nomsizilo omuhle owashiywa abadlali abadlali abadabuka eNewcastle uma egcina ejoyine elinye lamaqembu aseSoweto Isithombe: BACKPAGEPIX
NHLANHLA SITHOLE | July 12, 2020
UMA egcina ejoyina i-Orlando Pirates noma iKaizer Chiefs, uSifiso Hlanti odlala emuva kwesokunxele kwiBidvest Wits, uhlalelwe wumsebenzi omkhulu wokungagqwalisi umsizilo oshiywe ngabadlali abadabuka endaweni azalelwa kuyona eNewcastle.
Ngokusho kwemenenja yakhe uSizwe Ntshangase, yiPirates noma iKaizer Chiefs, amaqembu aseNingizimu Afrika adlala kwiPremiership okungadlala kuwo uHlanti uma esafuna ukuqhubeka nokudlala ibhola kuleli.
Yize uHlanti esedlala kwiBafana Bafana kodwa inselelo abhekene nayo wukuthi uma kufezeka isifiso semenenja yakhe uzokwazi yini ukulandela ezinyathelweni zo-Innocent Mncwango noHelman “Midnight Express” Mkhalele abanqobe iCaf Champions League ne-Orlando Pirates ngo 1995. UMkhalele waphinde wanqoba i-Afcon ngo 1996.
UFani Madida ngo 1991 owagila izimanga evalela phakathi amagoli angu-28, uMoren “Samora” Khulu owaqhulula amagoli nokwaholela ekutheni abizwe ngoMr Ellis Park, Siyabonga Nkosi owanqoba izicoco ezimbili zeligi neChiefs, wadlondlobala wayodlala kwi-Armenia Bielefeld yaseGermany noSizwe Motaung odle isicoco se-Afcon neBafana Bafana ngo 1996 waqhubeka wayodlala kwiTenerife yaseSpain.
UHlanti usebhekelwa iqembu nje ikusasa labadlali abaningi beBidvest alicacile kulandela ukusabalala kwezindaba zokuthi selithengwe usomabhizinisi waseLimpopo uMasala Mulaudzi ongummikazi weTshakhuma.
“Nakuba singakazi ukuthi uSifiso (Hlanti) uzoya kuphi njengoba sisabheke ukuthi kuqedelwe imidlalo yeligi kodwa akukho lapho engadlala khona ngaphandle kwamaqembu amabili. Uma esazimisele ngokudlala ibhola kungaba yiPirates noma iChiefs. Lokhu engikushoyo akusho ukuthi kukhona esikuxoxayo nalawa maqembu, kuwukuveza uvo lwami. Kodwa abantu okumele bakwazi wukuthi ngeke ayodlalela iqembu laseLimpopo,” kusho uNtshangase.
Le nkulumo kaNtshangase inakho ukudweba isithombe indlela yakhe ingase ibheke eNingizimu nedolobha iGoli, okuyiNaturena noma ekasi lamakasi, i-Orlando.
UHlanti uqale ukugqama kwiThanda Royal Zulu nokwaholela ekutheni athathwe ngaMaZulu. Ngesikhathi Usuthu ludliwa yizembe ube eseba nezinkinga nalo ngoba engasathandi ukuyodlala kwiNational First Division (GladAfrica Championship) nokwagcina ngokuthi bamkhulule abaphathi wayodlalela iWits.
Ithuba alinikezwa ngumqeqeshi weziTshudeni uGavin Hunt, walibamba ngazo zombili njengoba egcine esengomunye wabadlali abayizethenjwa eqenjini lesizwe ngaphansi kukaStuart Baxter.
Kuthe noma sekunguMolefi Ntseki kwaba yisimo esifanayo waqhubeka lapho kugcine khona uBaxter kwiBafana.
Izidumbu zababili zitholwe zimbobombobo yizinhlamvu
‘Wuzungu oludala izinsolo ngeSizabantu’
Badutshulwe bephuma ephathini
Bazomasha ngenxa yomsolwa odedelwe kwelikaBobo
Kushone abawu-13 iloli lihudula itekisi